DOWNLOAD DRIVERS MAKA CANON LASERBASE MF3228 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Canon LaserBase MF3228 Multifunction Printer
Ngwaọrụ multifunction, nke a na-ejikọta ngwaọrụ, chọrọ ndị ọkwọ ụgbọala maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị, karịsịa na sistemụ Windows 7 na nke ochie nke sistemụ arụmọrụ sitere na Microsoft. Ngwa nke MF3228 nke Canon abughi ihe ozo na iwu a, ya mere, na nduzi nke taa anyi ga elele uzo ndi isi acho ma chota ndi ozo maka MPP.
Download drivers maka Canon LaserBase MF3228
E nwere ihe ngwọta anọ maka nsogbu anyị ugbu a, nke dị iche na algorithm nke omume. Anyị na-akwado ka ị buru ụzọ mara onwe gị, wee họrọ nke kachasị mma maka gị onwe gị.
Usoro 1: Site na Nkwado Canon
Mgbe ị na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala maka otu ngwaọrụ, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịga na ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-emeputa ihe: ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etinye njikọ na ọdụ ha iji budata ngwanrọ dị mkpa.
Gaa na Porton Canon
Pịa njikọ n'elu wee pịa ihe ahụ. "Nkwado".
Ọzọ - "Nbudata na Enyemaka".
Chọta eriri ọchụchọ na ibe ma tinye aha ngwaọrụ na ya, n'ọnọdụ anyị MF3228. Biko mara na nsonaazụ ọchụchọ ga-egosipụta MFP achọrọ, ma kọwaa dị ka i-SENSYS. Nke a bụ otu akụrụngwa ahụ, wee pịa ya ka ọ gaa na enyemaka enyemaka.
Na saịtị ahụ na-akpaghị aka nyochaa mbipute na bitation nke sistemụ arụmọrụ, ma ọ bụrụ na enweghi mkpebi siri ike, tinye aka ndị dị mkpa iji aka na-eji ndepụta akara na nseta ihuenyo.
A na-ahazi ndị ọkwọ ụgbọ ala site na ndakọrịta na bitation, ya mere, ihe niile fọdụrụ bụ ka ịpịgharịa peeji nke na ndepụta ndepụta, chọta ngwanrọ ngwanrọ kwesịrị ekwesị ma pịa bọtịnụ "Download".
Tupu ibudata, gụọ nkwekọrịta onye ọrụ, wee pịa "Nabata Usoro na Download".
Mgbe achichachara, wụnye ọkwọ ụgbọala dịka ntụziaka ndị dị na ha.
Usoro a kọwara n'elu bụ ngwọta a pụrụ ịdabere na ya, yabụ anyị na-akwado ya maka ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ.
Usoro 2: ngwanrọ nke atọ
Ndị na - ejikarị kọmputa eme ihe nwere ike ịmara na adịmị nke software na - akwọ ụgbọala: obere ngwa nwere ike ịchọpụta ngwaike njikọ ma chọpụta ndị ọkwọ ụgbọala maka ya. Ndị dere akwụkwọ anyị elelerịrị ihe kachasị mma nke ngwanrọ dị otú ahụ, ya mere maka nkọwa, zoo aka na nyochaa kwekọrọ.
Anyị ga-achọ ịdọrọ uche gị na usoro ihe omume DriverMax. Njirimara ngwa ahụ bụ enyi na enyi, ma na nsogbu, anyị nwere ntụziaka na saịtị ahụ.
Ihe Ọmụmụ: Imelite ndị ọkwọ ụgbọala na usoro ihe omume DriverMax
Usoro 3: ID ID
Ụzọ ọzọ dị mma ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ a jụrụ ajụdịdị chọrọ itinye usoro ihe omume ndị ọzọ. Iji jiri usoro a, ọ ga-ama mara LaserBase MF3228 ID - ọ dị ka nke a:
USBPRINT na CANONMF3200_SERIES7652
Ọzọkwa, a ga-enyerịrị njirimara a na ibe nke a pụrụ iche pụrụ iche dịka DevID: ọrụ nyocha nke ọrụ ahụ ga-enye ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị. Enwere ike ịchọta ntụziaka zuru ezu maka iji usoro a mee ihe n'isiokwu dị n'okpuru ebe a.
Usoro 4: Ngwaọrụ System
Ụzọ ikpeazụ a na-agụnye iji ngwaọrụ ndị e wuru n'ime Windows.
Kpọọ "Malite" ma mepee ngalaba "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ".
Pịa ihe "Ịwụnye ndị na-ebi akwụkwọ"emi odude ke toolbar.
Họrọ nhọrọ "Onye nchịkọta obodo".
Wụnye ọdụ ụgbọ mmiri kwesịrị ekwesị na pịa "Na-esote".
A ga-emeghe windo na nhọrọ nke ụdị ngwaọrụ sitere na ndị nrụpụta dị iche iche. Ewoo, ma na ndepụta ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ na anyị achọghị ya, wee pịa "Mmelite Windows".
Na ndepụta ndị a, chọta ihe ị chọrọ ma pịa "Na-esote".
N'ikpeazụ, ịkwesịrị ịtọ aha onye nbipute, wee jiri bọtịnụ ahụ ọzọ. "Na-esote" iji budata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka.
Dịka iwu, mgbe ị wụnye ngwanrọ ahụ, achọrọghị reboot.
Anyị lere anya anọ nhọrọ maka ịchọta na nbudata ndị ọkwọ ụgbọala maka Canon LaserBase MF3228 MFP.